DALJIRE: Xeerka Anshaxa Mafrishka | Xarshinonline News
Posted by xol2 on April 28, 2010 · Leave a Comment
Dubbe iyo Doolaal duqay weeye magaalo oo dalkooda ilaasha. Waa laba aan kala daalin dariiqna aan wada qaadin. Midba duubka wanaagga dushaasuu ku sitaa iyagaaba is doortay.Waa laba aan debec yeelan oon hadal diirkaba saarin deelqaafna wuu ka dhacaa. Haddana inay is dilaan iyo dudmana loogama yaabo. Waa niman aan dan ka yeelan dadka kay ku arkaan waxay diidan yihiin ee duunkoodu la yaabo derejo uu doono ha yeeshee, kay daafacayaanna inta daaqsinta geela looga soo durki maayo.
← Wasiirka Maaliyadda oo Golaha Wakiilada la hortagay Miisaaniyadda 2010
Komishanka oo ku dhawaaqay tirada codbixiyeyaasha Serverku soo saaray →